NAKUBA ZISEKHONA IZINSELELO ,KUNINGI OSEKUZUZIWE UKULETHA IZINSIZA ZOKULWA NOKUBHEBHETHEKA KWEGCIWANE LESANDULELA NGCULAZI (HIV) – Isambane News
Home > Featured > NAKUBA ZISEKHONA IZINSELELO ,KUNINGI OSEKUZUZIWE UKULETHA IZINSIZA ZOKULWA NOKUBHEBHETHEKA KWEGCIWANE LESANDULELA NGCULAZI (HIV)
NAKUBA ZISEKHONA IZINSELELO ,KUNINGI OSEKUZUZIWE UKULETHA IZINSIZA ZOKULWA NOKUBHEBHETHEKA KWEGCIWANE LESANDULELA NGCULAZI (HIV)
December 2, 2016 Isambane News
By Dr Sibongiseni Dhlomo, KZN MEC for Health
“Isifo segciwane lengculazi nesandulela salo (HIV) kuyingozi enkulu kunazo zonke esesike sabhekana nazo emakhulwini amaningi eminyaka. Lezi zifo zimbi njengempi yomhlaba njengoba izigidi zabantu zibulawa yizo.”
Lamazwi ashiwo owayenguMengameli wakuleli uDkt Nelson Mandela ngomhla ka 01 KuDisemba ka-2000. Wayeyihlabe esikhonkosini ukuchaza isimo sangaleso sikhathi.
Kepha njengoba namhlanje (01 Disemba 2016) amazwe omhlaba ebumbene ekuqwashiseni ngengculazi ngosuku lwe-World Aids Day 2016, akungabazeki ukuthi ukube okaMadiba ubengavuka ubengaziqhenya ngebanga eselihanjwe yizwe lakithi phakathi kokunye, ekuhlinzekweni kwalabo abahaqwe yileli gciwane ngezinsiza zezempilo, kanye nokulwa nokubhebhetheka kwalo.
UHulumeni waseNingizimu Afrika sewenze lukhulu ukuqinisekisa ukuthi abantu abahaqwe isandulela ngculazi baphilla kade, futhi kahle. Abantu abasaguli bashone ngokushesha njengakuqala.
Abazali nezinhloko zemizi sebekwazi ukuphila isikhathi eside, ngaphandle kokwesaba ukuthi bazofa bashiye izintandane. Omama abakhulelwe abanegciwane le-HIV sebekwazi ukuteta abantwana abangenalo leli gciwane.
Nakuba zisekhona izinselelo ezinqala ekulweni nokubhebhetheka kwaleli gciwane – njengoba lokhu kudlange kakhulu kwabesimame abaneminyaka ephakathi kuka 15- 24 – kubalulekile ukuba siqaphele ukuthi kuningi oseluzuziwe kulombhidlango.
Ukuhlinzekwa kwabanegciwane le-HIV ngaphandle kokuthi balinde (Universal Test and Treat):
Kusukela mhla ka-01 September 2016, wonke umuntu ohlolwa kutholwe ukuthi unegciwane le-HIV usenikwa imishanguzo (emva kokwelulekwa), ngaphandle kokulinda kuze kwehle i-CD4 Count njengakuqala. Phambilini, imishanguzo ibiqala ukutholakala uma umuntu ene-CD4 Count ka-200, kwakhuphuka kwaya ku-350, kanti kugcine sekuwu-500.
Ukungalindi kuze kwehle iCD4 Count kusiza kakhulu ngoba igciwane linqandwa lingakasabalali emzimbeni womuntu, futhi kusho ukuthi i-HIV ayisezubhebhetheka kalula, nabantu ngeke besasheshe bashone. Abantu asebeke bahlolwa kwatholakala ukuthi baphila negciwane le-HIV, kodwa abangakaqali ukuthatha imishanguzo, bayanxuswa ukuba babuyele emitholampilo ukuze bayithole.
Uhlelo lokuhlola i-HIV nokukhishwa kwemishanguzo ngabahlengikazi, i-Nurse Initiated Management of Antiretroviral Treatment (NIMART):
Uhlelo lwe-NIMART lwethulwa ngonyaka ka-2010, kanti selubathuthukise kakhulu abahlengikazi, njengoba labo asebeqeqeshiwe sebekwazi ukwenza imisebenzi ebiyenziwa ngo-dokotela kuphela phambilini. Lapha singabala ukuhlolwa kweziguli nokuhumusha imiphumela yegazi esuke iphuma e-laboratory, nokukwazi ukushintsha uhlobo lwemishanguzo olutholwa yisiguli uma kufanele.
Laba bahlengikazi babambe elikhulu iqhaza ukusiza isifundazwe saKwaZulu-Natali ukuba sifinyelele kubantu abangaphezu kuka 1,3 million asebenikwe lemishanguzo yokuthithibalisa i-HIV.
Phakathi kwezenzo zobuqhawe ezenziwe abanye balabahlengikazi be-NIMART singabala:
• Umhlengikazi owakwazi ukushintsha umqondo wowesilisa obene-HIV kanye namakhosikazi akhe amane ukuba baqale imishanguzo yokuthithibalisa i-HIV;
• Umhlengikazi owakwazi ukugqugquzela owesilisa obenegciwane ukuba aqale ukuthatha imishanguzo wayeka ukwesaba ukuthi inkozikazi yakhe esencane izomshiya uma eyitshela ngesimo sakhe. Emva kwalokho unkosikazi wakhe wathi uma ezwa lokhu wameseka, wabe eseqinisekisa ukuthi uzomnakekela athathe imishanguzo njalo ngesikhathi esifanele futhi bazosebenzisa i-condom njalo uma beya ocansini.
Uhlelo lokusokwa kwabesilisa okuphephile, i-Medical Male Circumcision:
Kusukela ngonyaka ka-2010, isifundazwe saKwaZulu-Natal sesisoke abesilisa kanye nabafana abangaphezulu kuka 740 000 selokhu iSilo samaBandla uKing Goodwill Zwelithini sahlaba ikhwelo lokuthi kuvuselelwe isiko lokusoka.
Selokhu lwaqala loluhlelo, akukaze kubikwe sigameko sokushona kwabantu ngenxa yalo. Loluhlelo lubadakanya ukufundjisa abesilisa ngendlela yokuziphatha empilweni. Abesilisa abahambela izinkambu zethu siyabafundisa ngokuba babengamadoda aqotho angomuso, azozihlonipha, aphinde ahloniphe abantu besifazane kanye nezingane.
Siyafisa ukukugcizelela ukuthi ukusoka akumuniki umuntu igunya lokuthi usengavele alale nje noma kanjani ngaphandle kokusebenzisa ikhondomu uma eya ocansini, ngoba kuwanciphisa ngo 60% kuphela amathuba okuthola isandulela ngculazi.
Sinxusa abazali nabaqaphi bezingane esifundazweni ukuba bavumele bonke abafana abasebancane njengoba sekuzoba yisikhathi samaholide ukuthi bezosoka ezinkanjini zethu esizihlelile ezikhungweni zezeMpilo, ezikoleni nasemahholo omphakathi njengoba sihlale senza.
Ukwehla kakhulu kwesibalo sabantwana abasulekeka ngegciwane le-HIV ngesikhathi bezalwa (Prevention of Mother to Child Transmission of HIV):
Siyaziqhenya kakhulu ukuthi isibalo sabantwana abasuleleka ngegciwane le-HIV ngesikhathi bezalwa sesehle saze sacishe safika lapho siphela khona njengoba simi ku-1,2%. Sisuka kude nokho. Empeleni ngo-2009/2010 lesi sibalo besiwu-9,5%. Besilokhu sehle njalo. Lapha sibonga bonke abezempilo abaqinisekise ukuthi bonke abakhulelwe bayohlolelwa igciwane le-HIV. Sifisa ukugcizelela ukubaluleka kokuyoxukuza emtholampilo kubo bonke abazithwele. Lokhu kusiza ngokuthi uma kunezinkinga ezithile zisheshe zitholakale, bese kusizakala umama nomntwana.
Ukulwa ne-HIV ne-TB kanyekanye:
I-HIV nesifo sofuba (Tuberculosis) kufana namawele, kanti isifo sofuba yiso esibulala abantu abane-HIV kakhulu kunezinye. UMnyango wezeMpilo uyakuqonda lokhu. Yingakho sekufakwe imishini ebizwa nge-GeneXpert ewu-90 ezibhedlela, nekwazi ukusheshe iveze imiphumela ye-TB ne-Multi-Drug Resistant TB esikhathini esiphakathi kwamahora wu-24 kuya kwangu-48. Abantu abasalindi isikhathi eside ukuthola imiphumela njengakuqala.
Imiphumela eshaqisayo yocwaningo olwenziwe yisikhungo i-Centre for Aids Programme Research in SA (CAPRISA) isanda kuveza ukuthi angaphezulu kuka 2300 amantombazane kuzwelonke aphakathi kuka 15 no 24 iminyaka athola igciwane lesandulela-ngculazi njalo ngesonto kubantu abadala kunabo o-“sugar daddy” ababuye baziwe ngama-blesser.
Ongoti sebesitshelile ukuthi abesifazane abasebancane, nabangamile kahle kwezomnotho, ababi nawo amandla okuzikhulumela kulolu hlobo lobudlelwane. Kuba nzima-ke ukuqinisekisa ukuthi ucansi olwenziwa nalabobaba abadala kuba oluphephile, nokugcina kuba nomthelela ongemuhle emva kwesikhathi.
Phambilini, iCAPRISA iveze enye indlela abesimame abasengcupheni ngayo yokungenwa yi-HIV.
Kuthiwa ngesikhathi amantombazane kanye nabafana benza u-Grade 7 basuke bobabile bengenalo bonke igciwane. Kodwa ngesikhathi beqeda u-Grade 12, u7 kuya 10% wamantombazane asuke esenalo igciwane lesandulela ngculazi, kodwa abafana basuke bengakabi nalo.
Uma sebeyongena enyuvesi u10% wamantombazane afika esenegciwane lesandulela ngculazi. Ngesikhathi sebephothula iziqu zabo emva kweminyaka emine, u-25% wabafana namantombazane basuke sebenayo i-HIV, ngenxa yokuthi basuke sebethelelelene bodwa.
Ngifisa ukuthi sonke kufanele siwugxeke lomkhuba, siqwashise abantwana bethu ngobungozi bokudayisa ngemizimba yabo ngalolu hlobo kubantu abawomakadebona ngoba benemali.
Sinxusa wonke umuntu ukuba ayohlolela i-HIV noma kanye ngonyaka, ukuze uma kutholakala ukuthi unalo akwazi ukuqala umshanguzo masinyane. Akusizi ukuhlale ungazi, futhi ukungayi kohlolwa – nokukwenza ungasazi isimo sakho sempilo – akusho ukuthi awunalo igciwane le-HIV.
Okunye okubaluleke kakhulu wukuthi siqinisekise ukuthi asibabandlululi abantu abanegciwane le-HIV. Nakuba lingakatholakali ikhambi lokusapha, lesi sifo sesicishe sifane nezinye ngoba siyalawuleka, futhi baningi abantu abaphila naleli gciwane, asebekwazi ukuphila isikhathi eside.
Ngifisa ukunxusa intsha ukuthi ihlale ibhekile, ithathe izinqumo ezifanele ngaso sonke isikhathi ngempilo yayo. Muntu omusha, impilo yakho isezandleni zakho, futhi okwenza manje kungaholela kokuhle noma kokubi.
Nalabo abaya emicimbini kamatikuletsheni yokuvalwa konyaka, kumele baqinisekise ukuthi babuya bengenazo izifo. Ungavumeli ‘ukujabula’ kwesikhashana kone ikusasa lakho.
World Aids Day Message!!!
Local news SANCO marches for service delivery and corruption